Donald Trump oo ka guuraya guriga uu ka degenaa magaalada New York
Sagal Radio Services • News Report • November 1, 2019
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ka guurayo gurigii uu degenaa ee magaalada New York una guurayo guri kale uu ku leeyahay gobolka Florida.
Dowlada Jabuuti oo lacag ugu deeqday dadka ay saameysay fatahaada Beledweyne
Dowladda Jabuuti ayaa lacag gaareysa lix boqol oo kun oo dollar una dhiganta boqol malyan oo lacagta Frank Jabuuti ah ugu deeqday guddiga fatahaadaha.
Al-shabaab oo ku soo rogay deegaanada ay maamulaan barashada Luqada Carabiga
Guddoomiyaha ururka Alshabaab ee gobolada Jubbooyinka Sheekh Max’med Abuu Cabdalla ayaa ku dhowaaqay olole lagu carabiyeynayo dadka ku nool deegaanadaas.
Culimada magaalada Laas-caanood ayaa ku baaqay gurmad loo fidiyo Baladweyne
Culimada magaalada Laascaanood ayaa ku dhawaaqay gurmad aan kala hadlahayn iyagoo inta badan qudbadii Jimcaha lagu soo qaatay dhibaatada ka taagan gobolka Hiiraan.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, halkaasoo horay ugu sugnaayeen maleeshiyo taabacsan Ahlusuna Wal-jameeca.